Lungisa "i-iTunes ayikwazanga ukuxhuma kule iPhone, Ivelu Lilahlekile" Iphutha
Okufanele ukwenze Lapho i- “iTunes Ayikwazanga Ukuxhuma Kuyi-iPhone, Inani Liyashoda”
Isifinyezo: Lo mbhalo uzokukhombisa izizathu ezingenzeka ze- “Inani alikho” nezindlela zokulilungisa. Futhi, uma iphutha lingakwazi ukulungiswa, noma umphumela osombululwayo wokuxazulula inkinga awemukeleki, usengathola enye indawo ye-iTunes.
We’ve received some reports from readers saying that they failed to connect their iPhone to iTunes and received a notification – “I-iTunes Ayikwazanga Ukuxhuma Kule iPhone, Ivelu Lilahlekile”. Ngaleli phutha, awukwazi ukuvumelanisa ne-iTunes futhi uyisebenzise ukuvuselela, ukubuyisela noma ukwenza isipele kudivayisi yakho. Ukuthola kabusha ukuxhumeka kwakho kwe-iTunes, le ndatshana izokukhombisa kanjani ukulungisa iphutha le-iTunes elilahlekile. Kepha okokuqala, kudingeka qondisisa inkinga yokuqala ye-iTunes Value Missing kuqala.
# Mayelana “I-iTunes Ayikwazanga Ukuxhumeka Kuyi-iPhone, Inani Liyashoda”
Iphutha elilahlekile le-iTunes Value kungenzeka lapho:
I-iPhone yakho ikhutshaziwe futhi uzama ukuyivumelanisa ne-iTunes;
Ubeka i-iPhone yakho kwimodi yokubuyisela noma imodi ye-DUF bese uyixhuma ku-iTunes;
I-iPhone yakho inokuthuthuka okungaphumelelanga futhi uzama ukuyilungisa nge-iTunes;
I-handset yakho ihamba kahle ngokuphelele, akukho okubonakala kungahambi kahle.
Eyakho I-iTunes kungenzeka ibe nezinkinga ezingachazwanga, the problems give iTunes incapability of detecting your iPhone, so your iTunes is not available to connect. In this case, we can solve the problem by ukulungisa i-iTunes yakho.
Okunye ukuthi i-iPhone yakho ine-bug yesistimu. Isiphazamisi sivimbele i-iTunes ukuthi ibone i-handset yakho futhi ngenxa yohlaka olukhethekile lohlelo lwe-iOS, thina ngeke ikwazi ukulungisa isilambu kuphela, kepha ukufaka uhlelo lwezinselele lwakudala okusha okusha.
Ngokuya ngezizathu ezi-2, ungaba nezindlela ezithile zokulungisa iphutha:
Indlela yoku-1: Yivuselele noma ufake i-iTunes yakho kabusha ukulungisa iphutha.
Indlela 2: Lungisa i-iPhone yakho ukulungisa iphutha.
Indlela 3: Faka i-iPhone yakho kwimodi yokubuyisela kabusha.
Indlela 4: Buyisela i-iPhone yakho kumodi ye-DUF.
Amathiphu: ungakha isipele / ukusetha kabusha idivaysi yakho ngaphandle kwe-iTunes
Imvamisa, uma inkinga idalwa yi-iTunes. Singayixazulula kalula ngokuvuselela noma ukufaka kabusha i-iTunes.
Ukuvuselela i-iTunes, udinga ukwethula i-iTunes kwi-PC yakho, bese uya ku Help > Bheka Ukuvuselelwa, ukwenza isiqiniseko sokuthi unayo inguqulo yakamuva ye-iTunes.
Uma, i-iTunes ku-PC yakho inguqulo yakamuva, zama ukuyifaka kabusha. Khipha kuqala futhi landa okusha kwi-PC yakho.
Ngemuva kokuvuselelwa noma ukufakwa kabusha, uma usahluleka ukuvumelanisa i-iPhone yakho kwi-iTunes. Le nkinga ingahle ivele ku-iPhone yakho. Bheka isigaba esilandelayo ukulungisa umshini wakho.
Ngenkathi inkinga idalwa yiphutha elingaziwa kwifoni yakho, ukuyilungisa kungakusiza ekutholeni kabusha ukuxhumana ku-iTunes. Ukulungisa iphutha lesistimu ye-iOS, sidinga usizo kusuka I-FoneLab. Kuyafana ne-iTunes, I-FoneLab iyithuluzi lokuphatha i-iOS ongayisebenzisa ukwenza imisebenzi eminingi, ngokwesibonelo, ungayisebenzisa ukuthola idatha elahlekile noma i-iTunes / iCloud backup, backup futhi ubuyisele idatha kwi-handset, futhi ulungise amaphutha kudivayisi ye-iOS. Ukuba namandla okulungisa amaphutha e-iOS, i-FoneLab ingakusiza ukulungisa iphutha le-iTunes Value Missing ngokuchofoza okuthile.
Nakhu I-FoneLab angakwenzela:
Iphatha amaphutha angaphezu kwama-50, kufaka nezinkinga zedivayisi, njenge-iPhone ikhutshaziwe, inamathele kuzindlela ezahlukahlukene, ayikwazi ukuvula noma ukubuyekeza, ayikwazi ukuxhuma kwi-iTunes, njll.
Ilula kodwa iyasebenza. Awekho amasu adingekayo, kutholwa inani eliphakeme lokuphumelela.
Amaphutha amaningi angaxazululwa kube kanye, kube ngathi i-iPhone yakho ikhutshaziwe futhi ayikwazi ukuxhumana ne-iTunes, I-FoneLab inganika amandla i-iPhone yakho futhi ikusize ukuxhuma kwi-iTunes.
Manje, ake sibone ukuthi usebenzise kanjani I-FoneLab ukuxazulula inkinga yakho.
Isinyathelo 1 Landa i-FoneLab kwi-PC yakho, bese uyiqala
Isinyathelo 2 Khetha Ukubuyiselwa kwesistimu ye-iOS
Imisebenzi emithathu ibhaliwe, khetha Ukubuyiswa kwesistimu ye-iOS ukulungisa i-iPhone yakho, bese uxhuma i-iPhone yakho ne-PC ngekhebula le-USB, zama ukusebenzisa isengezo sokuqala.
Isinyathelo 3 Skena i-iPhone yakho
In order to find out the error on your iPhone, click Qala ukuskena i-iPhone yakho. Ukuskena kuzokwenziwa ngemizuzwana, bese ubona iphutha eliqondile le-iPhone yakho, chofoza Lungisa ukuqhubeka.
Isinyathelo 4 Landa i-firmware ukulungisa iphutha
Kunikezwa izindlela ezimbili zokulungisa. Lapha, kudingeka sikhethe Imodi Ethuthukile ukulungisa i-iPhone. Qhafaza Qinisekisa ukuqhubeka.
Bese, I-FoneLab izoklelisa imininingwane yedivayisi yakho, qiniseka ukuthi ilungile. Qhafaza Ukulungisa ukulanda i-firmware. Le firmware izosetshenziselwa ukulungisa i-iPhone yakho.
Ngemuva kokuthi ukulanda kuqedile, I-FoneLab uzoqala ukulungisa i-iPhone yakho.
Lapho inqubo isiqedile, ungaxhuma i-iPhone yakho ne-iTunes ngaphandle kwenkinga.
Ukulungisa i-iPhone yakho kuzosusa yonke idatha nezilungiselelo. Ungadinga ukukwenza isipele idatha yakho ngaphandle kwe-iTunes.
Ilokhi yezithwala engavuleki izokhiywa kabusha.
Idivaysi ephukile ejele izobuyiselwa esimweni esingashayi ejele.
Indlela 3 Faka i-iPhone yakho kwimodi yokubuyisela kabusha
Lapho i-iPhone yakho inokuthile okungahambanga kahle, singakubeka kwimodi yokubuyisela futhi uyixhume ku-iTunes ukulungisa iphutha.
Isinyathelo 1 Sokubuyisa imodi
Qeda amandla ocingweni lwakho kuqala. Bese,
Kwamamodeli we-iPhone 8/8 kanye namamodeli akamuva: Cindezela ubambe inkinobho yokuLala / Wake;
Ye-iPhone 7/7 Plus: Qhubeka ngokucindezela inkinobho ye-Down Down;
Okwamamodeli we-iPhone 6/6 Plus nangaphambilini: Cindezela ubambe inkinobho Yasekhaya nenkinobho Yokulala / Wake.
Khipha izinkinobho (izinkinobho) lapho ubona isikrini sokubuyisa imodi, xhuma ucingo ku-PC ngentambo ye-USB.
Isinyathelo 2 Buyisela insiza yakho
I-iTunes izobona insiza yakho bese iqala ngokuzenzakalelayo.
Esibonakalayo, iya ku Amadivayisi bese ukhetha le divayisi, kuzovela isaziso, sithi kunenkinga nge-iPhone futhi ungazikhetha Buyisela or Update insiza. Lapha, khetha Buyisela ukulungisa inkinga. I-iTunes izoqala ukubuyisela i-iPhone yakho bese inkinga izolungiswa.
When the process is complete, you can connect your iPhone to iTunes without entering Recovery mode. However, using Recover mode to repair your device will lead to a complete data loss, you’d better isipele idatha yakho ngaphandle kwe-iTunes kuqala.
Indlela 4 Buyisela i-iPhone yakho kumodi ye-DFU
Njengomodi yokubuyisela emuva, imodi ye-DFU nayo imodi ye-iOS yokubuyisela amadivayisi. Imodi emfushane yokuvuselela i-Firmware yedivaysi, imodi ye-DFU ingakusiza uvuselele futhi ubuyisele idivaysi yakho noma ngabe i-iPhone yakho ikuthi. Ukulungisa iphutha, singazama imodi ye-DFU.
Isinyathelo 1 Faka imodi ye-DFU
Isinyathelo 2 Buyisela i-iPhone yakho
Once the DFU mode is successfully set, you’ll receive a pop-up notification on iTunes, saying your iPhone needs to be restored before it can connect to iTunes. Click OK ukuqhubeka.
Ku-iTunes, chofoza Buyisela i-iPhone, i-iTunes izoqala ukubuyisela i-iPhone yakho.
Uma usuqediwe, i-iPhone yakho izolungiswa ngokuphelele, manje usungaxhuma ku-iTunes ngaphandle kwamaphutha.
#iTunes Okuhlukile: Yenza isipele / Setha kabusha uhlelo lwakho lokusebenza ngaphandle kwe-iTunes
Yenza isipele i-iPhone yakho ngaphandle kwe-iTunes
Ukuze wenze isipele i-iPhone yakho futhi ubuyisele idatha kuyo, singafaka isicelo kuFoneLab. Njengoba kushiwo, i-FoneLab iyithuluzi elinamandla lokuphatha i-iOS, ungayisebenzisa ukwenza isipele futhi. Ukunikezela ngesipele sedatha elula futhi ubuyisele insiza, ungakhetha ukugcina leyo datha ebalulekile bese ushiya okusele ngemuva.
1. Landa uhlelo ku-PC yakho.
3. Khetha idatha ofuna ukuyenza isipele.
4. Chofoza ngokulandelayo ukuze uqale.
Idatha yakho izolondolozwa kahle kwi-PC yakho lapho, ungayikhetha Ukubuyiswa kwedatha ye-iOS ukuze ubuyisele idatha kudivayisi.
Setha kabusha i-iPhone yakho ngaphandle kwe-iTunes
Ku-iPhone yakho, thinta Settings > General > Reset > Reset All Settings and Contents, thepha u-Sula Manje ukuze uqhubeke. Ngemuva kwalokho, udinga ukufaka iphasikhodi yakho yesikrini nephasiwedi ye-iCloud ukuqinisekisa isenzo. Uma kufakiwe, kuzoqala kabusha ukusetha kabusha, vele ulinde ukuqeda.
Lapho ukwenziwa kabusha kwenziwa, akusekho idatha ne-Apple ID engasala, ungayifaka amandla bese usetha okusha.
Kuyacasula uma ubona i- “iTunes ingakwazanga ukuxhuma kule iPhone. Inani alikho ”. Kepha noma kunjalo, singathola indlela yokuphuma kukho. Vele uzame izindlela ezingenhla futhi ngethemba, ungayixazulula inkinga ngokukhululeka. Futhi, ungathola enye i-iTunes ukwenza isipele noma ukusetha kabusha okuvamile.
Factory Setha kabusha i-iPhone
I-Factory Setha kabusha i-iPad
Setha kabusha i-iPhone Locked
I-iPhone Iwele Emanzini
Shintsha Isikrini se-iPhone
Lungisa i-iPhone White Screen
Thola i-iPhone elahlekile
Buyisela i-iPad kuzilungiselelo zeFekthali
Lungisa Iphutha le-iOS
Imodi ye-DFU ye-iPhone
Imodi ye-iPad DFU
I-iPhone Stuck Kwindlela Yokubuyisela
I-iPhone Gcina Qalisa kabusha
Cima ukuqinisekiswa kwe-2-Factor
Ithembe Le Khompyutha
Lungisa i- "iTunes Ayikwazanga Ukuxhuma Kule iPhone, Inani Alikho"
Lungisa "i-iTunes ayikwazi ukuxhuma ku-iPhone ikhiyiwe ngekhodi lokungena"